Uthotho lwe-Ultra-high-voltage Series
Uyilo olutsha 1P, 2P, 3P, 4P, 125A Guqula utshintsho kwiNcwadi
AS (M) -125 uthotho lofakelo kunye nokusebenza kwencwadana iimeko eziqhelekileyo zokusebenza 1.Iqondo lobushushu lomoya li -5 ℃ ～ + 40 ℃, ixabiso eliphakathi kwiiyure ezingama-24 akufuneki libe ngaphezulu kwe-35 ℃. 2. ukufuma isihlobo kufuneka ingadluli 50% kwiqondo lobushushu + 40 ℃, ukufuma isihlobo eliphezulu kuvumelekile emazantsi ...
Kutheni iZinc oxide Lighting arrester iyathandwa?
I-Zinc Oxide arrester arrester isetyenziselwa ukukhusela izixhobo zombane kulo lonke uhlobo lwe-voltages ezibangelwa kukukhanyisa okanye ukutshintsha imisebenzi. (I-Zinc oxide yokubamba umgca wokubamba usebenzisa) Ukunyuka kokubanjwa kokhuselo oluphezulu kakhulu lwevolthi kwihlabathi, elenziwe nge-metal-oxide (MO) ...
Malunga nokuziphilisa kohlobo lweShunt Power Capacitor
Kukho iinkcukacha ze-B (S) MJ capacitor: Uhlobo lokuziphilisa lweShunt Power Capacitor lisetyenziswa kwinkqubo yamandla ye-50Hz okanye ye-60Hz ikakhulu ephucula: , △ Phucula umgangatho ombane. Coca ubungakanani bombane kwaye ke o ...
Uyilo olutsha lwe-16A ukuya kwi-100A 4P yoTshintsho oluzenzekelayo
Iswitshi yamandla jikelele ye-ASIQ (emva koku ebizwa ngokuba yiTshintsho) siswitshi esinokuqhubeka nokubonelela ngombane kwimeko kaxakeka. Iswitshi iqulathe iswitshi yomthwalo kunye nolawulo, olusetyenziselwa ubukhulu becala ukubona ukuba ngaba umbane ophambili okanye umbane wokulinda ulungile. Xa i ...
Ngaphandle 33kV 35kV 36kV 1250A Umshini weSekethe Breaker enesiguquli. Ngaba ungasebenza kakuhle kubushushu obufutshane: -40 ℃ ~ + 40 ℃. Ulwakhiwo olulula, ulondolozo lwasimahla kunye nobomi benkonzo ende busetyenziswa kwinqanaba levolthi ye-35kV, kubandakanya imigca ephezulu, amashishini asezimbonini kunye nezemigodi, izitishi zamandla, indawo ...
Uyilo olutsha lwe-1P, 2P, 3P, 4P, 125A yoLuhlu lweChan ...
Malunga nohlobo lokuziphilisa lweShunt Power Capac ...
Design New 16A To 100A 4P oluzenzekelayo Chang ...